Mmekorita a na - ebute site na Porn na Sexuality - Foundation Foundation
Home Ọrịa na-ebute na Porn na Sexually Transmitted
Nsogbu na-ebute site ná mmekọahụ (STI), bụkwa nke a kpọrọ ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ (STD) na ọrịa venereal (VD), bụ ọrịa na-agbasakarị site na mmekọahụ, karịsịa mmekorita ahụ ike, mmekọahụ gbasara ahụ ike na mmekọahụ. Imirikiti STI na mbụ anaghị akpata mgbaàmà. Nke a na - ebute ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịfefe ndị ọrịa ahụ.
Porn nwere ọrụ dị iche iche abụọ dị na otu anyị ga-esi eche echiche gbasara mmekọahụ anyị nwere ike inwe nsogbu ahụike.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ma na-egbo onwe gị agụụ mmekọahụ, ma na-enweghị mmekọahụ ọ bụla, ị ga-enwe nchebe pụọ na ịchụso ọrịa STI ọ bụla. Nke a bụ eziokwu kpamkpam, mana ọ bụghị akụkọ dum. Problems ka nwere ike ibute nsogbu ahụ ike nke a mụtara kama ịrịa ọrịa. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke, site n'ikiri ọtụtụ porn ị ka na-ekpughere onwe gị na nsogbu ndị nwere ike ịdị ogologo oge na-adịghị arụ ọrụ erectile (PIED) nke porn, anorgasmia ma ọ bụ ejaculation egbu oge. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ị na-ele egwu ị na-egwu egwu nwere ike ịzụ ahụ gị ka ị họrọ ihe eji egwuri egwu nwoke ma ọ bụ igbo onwe ya kama inwe mmekọrịta chiri anya na ezigbo ndị mmekọ. Ndị na-egwu porn dị egwu na-azụ ọzụzụ maka egwuregwu na-ezighi ezi.
Nke abụọ, site n'ile egwu egwu, ị na-eche echiche ịchọrọ mmekọahụ ịchọrọ ịmeghachi ihe ị na-ahụ na porn. Porn a na-elekarị anya bụ mpaghara condom-free. Nke a na-eme ka ọchịchọ dị gị n'uche ghara ileghara condom anya maka mmekọrịta ma ọ bụ ihe mgbochi ndị ọzọ dị ka ụbụrụ ezé mgbe ị na-enwe mmekọahụ.
Mmekọahụ na-adịghị ize ndụ dị ka iji condom, inwe ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mmekọ nwoke na nwanyị, na ịnọ na mmekọrịta ebe mmadụ ọ bụla nwere mmekọahụ na ibe ya na-ebelata ihe ize ndụ ahụ. Ndị kasị egbu egbu bụ HIV na HPV. Nke a bụ ụfọdụ isi ihe gbasara ha.
Ọrịa immunodeficiency mmadụ (HIV) kpatara Ọrịa HIV na oge nwetara ọrịa na-enweghịzi nsogbu (AIDS). Oria HIV bu otu n'ime oria kacha egbu egbu n'elu mbara ala, nke umuaka 2 choro n 'oria oria ndi oria ojoo. Na 2014, o gburu ihe dịka nde mmadụ 1.4 na ihe dịka mmadụ 35 nde ndị ọzọ nọ na ya. Na United States banyere mmadụ 1.1 mmadụ, ya na ihe dị ka otu n'ime asatọ anaghị ama, na-eme ha nnukwu ihe ize ndụ gbasara ịmalite ọrịa ahụ.
Human Papilomavirus ma ọ bụ HPV bụ obere nje DNA nke na-emetụta akpụkpọ ahụ na ala mmiri nke ahụ dịka ọnụ, ikpu, cervix na ụbụrụ. E nwere ụdị HPV dị iche iche karịa 100. A na-ahụkarị ụdị anụ ahụ na akpụkpọ ahụ ma na-egosi dị ka waatị nke dị n'aka. Ụfọdụ ụdị HPV na-etinyekwa akụkụ nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-emetụta. Mmekọahụ nke HPV bụ ọrịa kachasị ebute site na mmekọahụ na US na n'ụwa nile. E nwere ma ọ dịkarịa ala ụdị HPV 40 nwere ike imetụta akụkụ anụ ahụ. Ụfọdụ n'ime ndị a bụ "obere ihe ize ndụ" na-eme ka ọkpụkpụ anụ ahụ bụrụ "ụdị dị elu" nwere ike ịkpata ọrịa cancer ma ọ bụ ụdị ọrịa cancer ndị ọzọ. Ụdị HPV dị elu nwere ike ime ka ọrịa kansa gwọọ, nke a na-akpọ ọrịa cancer oropharyngeal, nke na-emewanyewanye na United States na Europe.
Ọ dịla anya a mara na nje virus HPV dị ugbu a na mpaghara genital nakwa na ọ bụ ihe dị mkpa kpatara ọrịa cancer, vulvar, penile, na ọrịa cancer. Ekwenyere na ọnụ ọgụgụ dị ọtụtụ nke ndị mmadụ na-enwe mmekọ mmekọahụ na ọtụtụ ndị mmekọ ma na-etinye aka na omume nwoke na nwanyị na-esi na ya eme ihe na-emepụta HPV na isi na n'olu olu, na-ebute ọnụọgụ nke ọrịa cancer oropharynx. Enwere ike ịchọta nkọwa zuru ezu na HPV Ebe a.
E nwere ọtụtụ nkwụsị ndị ọzọ nke na-adịkarịrị ka ha bụ ọrịa na-egbu egbu, ma ha ka dị njọ maka ahụ ike gị. Ọ dịghị mgbe ọ dị mma ịchọrọ onye ọzọ ọrịa!
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọahụ, na-enye ndụmọdụ ma ọ bụ nkwado site na ndị ọrụ ahụike ahụike na-abụkarị amamihe.
Na Glasgow anyị na-akwado Sandyford, nke na-enyekwa ndị ọkachamara ọrụ maka nwoke nwere mmasị nwoke na ndị ikom site na Steve Retson Project. Na Edinburgh, ndị mmadụ na-aga Ahụike Lothian Sexual Health.